Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin, rapor sürelerinin bitmesi durumunda mağduriyet yaşamaması için, mevcut raporların ikinci bir duyuruya kadar [More ...]
Normalization na Ọdụ Ọha Ọha: Wepụrụ Mkpa Njikwa Njem 50 pasent: ibu ọrụ nke 'ibu pasent 50 nke ikike njem' malitere n'ihi ọrịa ọrịa coronavirus na okirikiri nke thelọ Ọrụ Mịnịstrị na-ahụ maka ime na njem nke ọha. [More ...]
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan wuchara owuwu nke Yeşilköy Prof. Dr. Ọ gara na mmeghe nke tlọ Ọgwụ Mberede Murat Dilmener. N’okwu ya, ụlọ ọgwụ Istanbul, Turkey na Erdogan, onye chọrọ ịbara mba ahụ uru, Prof. Dr. Murata [More ...]
E mepere ụlọ ọgwụ Yesilkoy Salgin
Emere na ntinye nke Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan, Prof. 1008-bed nke mepụtara na nnukwu mpaghara na ọdụ ụgbọ elu Ataturk. Dr. Murat Dilmener Hospital dị na Yeşilköy. Ọrịa ọgbụgba mberede ụlọ ọgwụ mberede, ala ọma jijiji [More ...]
Ministri nke ezinaụlọ, ndị ọrụ na ndị Ọrụ Ọhaneze kwuputara usoro ndị aga-ewere na ụlọ akwụkwọ ọta akara, klọb ụmụaka na ebe a na-elekọta ụmụaka, nke enyere ikike imeghe ma bido ịrụ ọrụ na 1 June. Normalization nke Onye Isi Ala Recep Tayyip Erdogan [More ...]
Trump gbochiri ntinye ndị China ịbanye na America: Onye isi ala US Donald Trump kwuru na n'ihi atụmatụ iji mejuputa iwu nchekwa nchekwa mba ọhụụ na Hong Kong, China ga-amachibido ndị ọrụ ya iwu, mana mba abụọ ahụ. [More ...]
Onye isi ala Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Prof. onye arụchara ya. Dr. O sonyere na mmeghe nke erilọ Ọgwụ mberede Feriha Öz. Emepere mmeghe ahụ, Onye isi ala Erdoğan na Minista Ahụike Fahrettin Koca gara ụlọ ọgwụ. N’okwu ya, Coronavirus [More ...]
N’oge na-adịghị anya: Na nnọkọ ndị nta akụkọ, Onye isi ala US Donald Trump kwupụtara na mmekọrịta ya na Healthtù Ahụ Ike ,wa, nke o yiri akwụkwọ ozi egwu, kwụsịrị n’oge na-adịbeghị anya. Na-apụta na Wuhan obodo China, yana ha niile na obere oge [More ...]
A na-amaliteghachi ọrụ agha na usoro demobilization n'ime oke nke usoro nje Corona. Minista na-ahụ maka nchekwa mba Hulusi Akar kwupụtara na usoro mwepụta ahụ ga-ebido na 31 Mee. Onye isi ndị ọrụ nchekwa, nke Hulusi Akar, Minister nke National Defence bụ onyeisi ya [More ...]
Ememe mmeghe nke National Electric Train, nke mepụtara n'ụlọ ọrụ ahụ dị na Sakarya ma kpọsaa na 29 Mee, akagbuo. Mgbe emepere ụlọ ọrụ mmepụta ahụ nke alumini na June 2019, ọ malitere imepụta na TÜVASAŞ. [More ...]
Oge mbu n’ime ule nnwale dị na ntanetị maka ụmụ akwụkwọ na-akwado YKS ga-eme na 30 Mee. Na ngwụcha ule a ga-eme na nnọkọ abụọ, a ga-enye ụmụ akwụkwọ ọ bụla akwụkwọ ozi. Mkpebi na Turkey, ga-ewere ọnọdụ na ọkwa obodo na nke distrikti. [More ...]
Mịnịsta gburugburu na obodo mepere emepe Murat Kurum, oru iri atọ na ise n'ime oru 25 na itinye ego ruru ihe ruru ijeri euro 1 nke etinyere n'ime ógbè iri abụọ na ise n'okpuru European Union Instrument for Aid Preition Accord (IPA). [More ...]